Maxaa loola jeedaa dhibcaha udub dhexaad u ah? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks Peer-fadeed daynta
1 Maxay tahay credit-to-peer-to-peer?
2 Sababaha loogu talagalay dhibcaha udub-u-dhiganta
3 Qoyska iyo Friends
4 Suuqa suuqa internetka ee loogu talagalay dhibcaha udub-dhexaadka ah
Maxay tahay credit-to-peer-to-peer?
Ein Peer-fadeed daynta waa deyn la siiyo shaqsiga gaarka loo leeyahay shakhsi kale oo gaar ah. Isku mid ayaa ah qof u siman oo ka mid ah koox isku mid ah qof kale. Taa bedelkeeda, waxaa jira heer sarreeya oo u dhexeeya shakhsi gaar ah iyo bangi.
Nooca amaahda ayaa sidoo kale loo yaqaan 'credit-person-to-person' -waxaa loo yaqaan 'P2P'. Haddii aad lacag ka amaahato walaalkaa ama saaxiibkaaga, waa sida deynta.
Si kastaba ha noqotee, deynta iyo deynjirayaasha uma baahna in ay is garanayaan. Tusaale ahaan, waxaa jira shabakadaha internetka ee u dhexeeya shakhsiyaadka gaarka ah ee raadinaya amaba bixiya deyn.
Sababaha loogu talagalay dhibcaha udub-u-dhiganta
Deyn-bixiyeyaasha u-dhibcaha ah waxay yeelan karaan faa'iidooyin iyo sidoo kale faa'iido darro ka iman karta noocyada kale ee deynta.
Markaad bangiga ka qaadato deyn, kharashyada dheeraadka ah sida khidmadaha wax soo saarka ayaa laga yaabaa inay soo baxaan. Intaas waxaa dheer, bangiyada intooda badani waa shirkado lacag la'aan ah oo doonaya inay dhaqaale ahaan u shaqeeyaan oo ay faa'iido u yeeshaan.
Marka laga hadlayo kareedhit-u-dhibcaha, faa'iidadaasi (haddii deyntu ogolaato) si toos ah ayey uga faa'iideysaa qof kale. Haddii qof isku mid ah inuu lacag kuugu dhigo bangiga, waxaad marar badan ku heli lahayd dulsaar yar oo ka hooseeya deyn gaar ah qof kale.
Qaarkood qaar ayaa sidoo kale rajeynaya fahamka aadanaha ee bixiyeyaasha - tusaale ahaan, haddii dib u bixinta dib loo dhigo ama aan caddeyn, dhab ahaan marka lacagta la amaahday dib loo bixin karo.
Si kastaba ha noqotee, rabitaanka fahamka iyo dhibaatooyinka iman kara markii la helayo bixinta lacag bixinta furan waxay tahay khasaare ka iman kara deyn bixiyaha.Haddii aad lacag amaahiso qofka iyo muddad go'an oo cayiman ayaa la isku raacay, waxaad codsan kartaa lacag dib uducaas kaddib. Baanku wuxuu leeyahay hab u dhisan oo caadi ahaan la shaqeeya qareennada kuwaas oo si joogto ah ugu lug leh kiisaska noocaas ah. Sida qof gaar ah, taas macnaheedu waa dadaal aad u badan.
Si kastaba ha noqotee, faa'iido darrida ayaa sidoo kale suuragal ah in qofku qaato kareedhit-u-dhibcaha. Deymano badan ayaa ka xishoonaya inay amaahdaan amaahda. Deegaanka shakhsi ahaaneed wuxuu u horseedi karaa dheellitir la'aan, dambiguna wuxuu culeys ku noqon karaa saaxiibtinimada iyo cilaaqaadka. Haddii adigu aad tahay deyn bixiye, waxaa laga yaabaa inaad leedahay xannibaadyo si aad u jimicsado lacag caddaan ah.
Intaa waxa dheer, khatarta loogu talagalay dhibcaha u-dhibcaha ah waa falanqeeyn lidi ku ah internetka. Si aad u kala soocaan dalabyada halista ah iyo kuwa aan la isku hallaynin badanaa waa caqabad ku ah kuwa deynsanaya oo aan khibrad lahayn.
Sidoo kale, Ingiriisiga, sharaxaadda Ingiriisiga "Qoyska iyo Saaxiibada" ayaa badanaa la isticmaalaa markaad ka ammaato qof aad taqaan ama aad lacag ka hesho. Lacagta amaahda laga soo qaato asxaabta iyo qoysku badanaa waa mid si aan rasmi ahayn u nidaamsan. Xaalado badan, waxaa jira hal heshiis oo keliya oo afka ah, taas oo ay sidoo kale waajib tahay.
Deymaha laga helo qaraabada ama saaxiibada inta badan deyn ahaan laguma heshiin, haddii ay yihiin qaddar yar. Deyn-bixiyuhu mar walba ma qorshaynayo qorshe faa'iido leh, laakiin wuxuu doonayaa inuu caawiyo saaxiib ama xubin qoyska ka tirsan xaalad adag. Hase yeeshee, dulsaar looma saari karo mabda'a, gaar ahaan qiimaha sare.
Suuqa suuqa internetka ee loogu talagalay dhibcaha udub-dhexaadka ah
Internetka, waxaa jira heerar kala duwan oo deyn bixiyeyaasha iyo kuwa iibsadayaasha ah ay heli karaan credit-to-peer-to-peer. Deyn bixiyuhu wuxuu yeelan karaa hal ama amaahiyo badan oo isku mid ah.
Xaaladaha qaarkood, amaahda waxaa lagu dhejiyaa meheradahaan xaraashka. Xaaladdan oo kale, amaahda amaahda waxay khuseysaa deyn-qaadaha suurtagalka ah ama kan kale. Foomamka isku dhafka ayaa sidoo kale suuragal ah.
Suuqyada suuqa internetka loogu talagalay deymaha isbarbar-dhigga ah ayaa raacaya himilada isu keenida dadka leh fikrado la mid ah shuruudaha deynta. Sababta amaahashada waxay sidoo kale door ka qaadan kartaa deyn bixiyaha. Hal tusaale ayaa ah ammaahda danyarta ganacsiyada yar yar ama dadaalka.
Maqaalka horeBayaanka Ujeedada
Maqaalka xigtabacda xafaayadda